ဂေဇက်ရွာမှ ဘုန်းကြီးနဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဝိုင်း (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ဂေဇက်ရွာမှ ဘုန်းကြီးနဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဝိုင်း (၂)
ဂေဇက်ရွာမှ ဘုန်းကြီးနဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဝိုင်း (၂)
Posted by ဇောက် ထိုး on May 23, 2012 in Buddhism, Politics, Issues |2comments
“ကဲ….ဒကာမိုး စောင့်နေရတာ ကြာသွားတယ်နော်….
“ ပြေသွားပါပြီ ဒကာမိုး…ကဲ ….စောစောက ဘုန်းကြီးနဲ့ နိုင်ငံရေးလေး ဆက်ကြဦးစို့…စကားလက်စသိမ်းရမှာပေါ့ဗျာ…အတိုချုပ်ပြောရရင်တော့…ဒကာမိုးရယ်..
အရေးတွေအားလုံးရဲ့ထိပ်မှာ ဘာသာရေးရှိရမယ်။ အရေးတွေအားလုံးထဲမှာ ဘာသာရေးပါရမယ်။ အထူးသိရမှာက ကိုယ်ပါရမယ့်နေရာကိုတော့ ကိုယ်သိ ရမယ်။
နောက်ထပ်ပြောမယ်။ ဂရုလေးစိုက်ပေးပါနော်….နိုင်ငံအတွင်းမှာ လုပ်တဲ့ နိုင်ငံအရေးတိုင်းမှာ ဘာသာရေးပါရမှာ..အဲဒီနိုင်ငံအရေးကိုလုပ်တဲ့လူတိုင်း ဆီမှာလဲ ပါရမယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဟာ လုပ်သူလဲမဖြစ်ရဘူး။ အရေးထဲပါသူ လဲမဖြစ်ရဘူး။ အဲဒီလုပ်သူနဲ့အရေးတွေမှာ တရားသူတွေနဲ့ ..တရားတဲ့ အလုပ် တွေဖြစ်ဖို့ညွှန်ပြနေရမှာ…
ဥပမာ..လူငယ်တွေ မင်္ဂလာဆောင်ဆိုပါတော့…သတို့သမီးအရံ..သတို့သား အရံ..မဏ္ဍာပ်ဆောက်…ရက်ရွေး…ဈေးဝယ် တွေမှာပါရမှာမဟုတ်ဘူး။ လင်ကျင့်ဝတ်…မယားကျင့်ဝတ်တွေပြောပြတဲ့နေရာမှာ ပါရမှာ။ အဲဒါတွေ သိဖို့က ဘာသာရေးအလုပ်ပဲ။ သီလပေးရုံ ရေစက်ချရုံ မဟုတ်ဘူး။ ဘာသာ ရေးဆိုတာ အလင်းရောင်..သူတို့ အသိအလင်းရောင်တွေပေးရမှာ.. သီလ ပေး ရေစက်ချနဲ့ပြီးသွားဖို့မဟုတ်ဘူး။ သူတို့အိမ်ထောင်ရေးတသက်မှာ ဘာသာရေးက ပေးလိုက်တဲ့..အသိတွေပါသွားရမှာ။ သူတို့အိမ်ထောင်ရေး တသက်မှာ သုံးလောက်စွဲလောက်တဲ့ အသိတွေပေးလိုက်ရမှာ အဲဒါ ဘာသာရေးပဲ…ကိုယ်က သုံးဖြစ်တယ်ထင်လို့ ပေးလိုက်ပြီး တကယ်သုံး မဖြစ်တာတွေဖြစ်ရင်တော့ အတော်မကောင်းဘူး။ နောင်လဲလိုချင်ကြတော့ မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိရမယ်နော်။
နိုင်ငံရေးမှာလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ…ဥပဒေပြုရေးကိစ္စ…အာဏာခွဲဝေရေးကိစ္စ.. ကျန်းမာရေးကိစ္စ….ပညာရေးကိစ္စ…..ဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စ….ကန့်ကွက်တဲ့ကိစ္စ..စတဲ့ လုပ်တဲ့လူတွေနဲ့ လုပ်တဲ့အလုပ်တွေထဲမှာ ဘုန်းကြီးတွေ ပါရမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလုပ် တဲ့ လူတွေနဲ့ လုပ်တဲ့အလုပ်တွေထဲ မှာ မတရားတွေနဲ့ မလုပ်ကြဖို့…. လောဘတွေ.. ဒေါသတွေ..မာနတွေ.အညိုး တွေနဲ့ မလုပ်ကြဖို့..ဒါတွေကိုပြောဟောညွှန်ပြနေရမှာ….အဲဒီလူတွေကို ဘုရား အဆုံးအမတွေသိအောင် ပြောနေရမှာ။ ကိုယ်ပေးတဲ့ဘုရားအဆုံးအမ အသိတွေကလဲ သူတို့သုံးဖြစ်တဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ် နော်။ သူတို့ရဲ့ အလုပ်တွေနဲ့ သူတို့သုံးမရတာတွေ…ပေးလို့ကတော့လဲ နားပူလို့ကြာလေကြောက်လေဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဆေးလုံးတွေ အမြဲသောက်ပြီး ရောဂါမပျောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်…အဲဒီဆေးကိုသောက်ချင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ရောဂါ မပျောက်တိုင်းလဲ..၀ဋ်နာ ကံနာ ချည်းမလုပ်သင့်ဘူး။ ဆေးသောက်လို့ ရောဂါမပျောက်တိုင်း ၀ဋ်နာ ကံနာလှည့်ချရင် လူနာသေဖို့ ကလွဲပြီး ဘာမှအကျိုးများမှာမဟုတ်ဘူး။ ဆေးကိုလဲ အမြဲသုံးသပ်သင့်တယ်။
အမြဲသွားနေပါလျှက်နဲ့ လိုရာကိုမရောက်ဖူးဆိုရင်…..မြေပုံ.ကိုပြန်ဆန်းစစ် သင့်ရင် ဆန်းစစ်ရမှာ…၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးတာတွေ..ညိနိုင်းတာတွေ..တိုင်ပင် တာတွေလုပ်သင့်ရင် လုပ်ရမယ်။”
“ ဆရာတော် ပြောတဲ့စကားတွေကို တပည့်တော်အားလုံးသိမ်းကြုံးပြီး မြင်လိုက်တဲ့ ဥပမာလေးတစ်ခုကိုလျှောက်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ တပည့်တော် ကွန်ပြူတာလေးတစ်လုံးဝယ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီကွန်ပြူတာဟာ ဘာဆော့ဝဲမှ မသွင်းရသေးရင်…ဘာမှ အလုပ်မလုပ်ဘူး။အဲဒီကွန်ပြူတာ အလုပ်လုပ်ဖို့ အကောင်းအဆိုး အမှားအမှန်တွေတွက်ချက်တတ်ဖို့က ဆော့ဝဲတွေသွင်းရ တယ်။ တကယ်အလုပ်လုပ်တာက ဆော့ဝဲတွေက အလုပ်လုပ်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဆော့ဝဲတွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ် ဆိုတဲ့ပိုးတွေဝင်ရင်တော့လဲ လေးသွားတာတို့….မှားနေတာတို့….တလွဲတွေတို့….မလုပ်တော့တာတို့ ဆိုတာတွေဖြစ်ကုန်ပြန်ရော့ဘုရာ့။ ဒီတော့ အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုသတ်ဖို့ ဗိုင်းရပ်စ်သတ်တဲ့ဆော့ဝဲထည့်ရသွင်းရပြန်ရောဘုရာ့။
အဲဒီလိုပဲ…နိုင်ငံတစ်ခုဆိုတာလဲ ဆော့ဝဲမပါသေးတဲ့ကွန်ပြူတာလိုပါပဲ။ ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ တောတောင်ရေမြေတွေကိုပိုင်းချားသတ်မှတ်ထား တာပါ။ အဲဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာ နေကြတဲ့လူတွေက အုပ်ချုပ်သူတွေရော… အုပ်ချုပ်ခံသူတွေရော..အားလုံးအားလုံးဟာ စီးပွားရေးတွေလုပ်ကြရတယ်။ ပညာရေးတွေ..ကျန်းမာရေးတွေလုပ်ကြရတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိကြတဲ့ လူတွေနဲ့အလုပ်တွေကတော့ ကွန်ပြူတာထဲမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ထည့်ထားတဲ့ ဆော့ဝဲတွေနဲ့တူပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေက ကျန်မာရေးအလုပ်လုပ်။ စစ်သား တွေက ကာကွယ်ရေးအလုပ်လုပ်။ တောင်သူတွေက စိုက်ပျိုးရေးတွေလုပ်။ ဒီအတိုင်းပါပဲ…အိပ်ဇဲဆော့ဝဲက စာရင်းတွက်တဲ့အလုပ်လုပ်။ နီရိုအိပ်က ခွေကူးတွေလုပ်။ ပါဝါဒါရိုက်တာတွေက တည်းဖြတ်အလုပ်တွေလုပ်။ ဂိမ်းဆော့ဝဲတွေက..ကစားစ၇ာ စိတ်ဖြေစရာအလုပ်တွေလုပ်လုပ်နဲ့ နိင်ငံအတွင်းကလူတွေ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ်လုပ်နေကြသလို..ကွန်ပြူတာထဲ ကဆော့ဝဲတွေကလဲ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ်ပါပဲ။ ဘာသာရေးဝန်ထမ်း ဘုန်းကြီးရဟန်းတွေကတော့…..ဗိုင်းရပ်သတ်တဲ့ ဆော့ဝဲလို့ဆိုရမယ်။ ဗိုင်းရပ်သတ်တဲ့ဆော့ဝဲကတော့ စာရင်းဇယားဆော့ဝဲထဲမှာလဲ ပါရတာပဲ။ စာစီစာရိုက်ဆော့ဝဲမှာလဲ ပါရမှာပဲ။ ကွန်ပြူတာထဲမှာရှိတဲ့ ဆော့ဝဲအားလုံးမှာ ဗိုက်ရပ်သတ်တဲ့ဆော့ဝဲက အလုပ်လုပ်ရမှာ…ဒါပေမယ့်သူကိုယ်တိုင်ကတော့ စာရင်းတွက်တဲ့အလုပ်ကိုလဲ မလုပ်ဘူး။ စာစီတဲ့အလုပ်ကိုလဲ မလုပ်ဘူး။ တည်းဖြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလဲ မလုပ်ဘူး။ အဒီလိုလုပ်နေတဲ့ဆော့ဝဲတွေ..မှန်ကန်ဖို့…မလေးဖို့…ဗိုင်းရပ်မ၀င်ဖို့ ဆော့ဖဲဝဲတိုင်းမှာ သူရှိနေရမယ်။ သူရှင်းနေရမယ်။ ဒါပေမယ့်သူကိုယ်တိုင်က တော့ ဘယ်အလုပ်မှာမှ ၀င်မပါဘူး။ ဘာသာရေးဝန်ထမ်းဘုန်းကြီးရဟန်း တွေလဲ ဒီအတိုင်းပဲ….နိုင်ငံတော်ထဲက အုပ်ချုပ်ရေး..ပညာရေး…စီးပွားရေး စတဲ့ အလုပ်တွေကိုလုပ်နေသူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တိုင်းမှာပါနေရမယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့လုပ်နေဖို့ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က နေရာတကာမှာ လုပ်နေသူတွေကို ဗိုင်းရပ်နဲ့တူတဲ့ အသိမှားတွေ…အလုပ်မှားတွေ….ကိလေသာပိုးတွေမ၀င်ဖို့…အဲဒီအသိမှား အလုပ်မှား ဗိုင်းရပ်တွေကြောင့် လေးလံထိုင်းမှိုင်းမှုမဖြစ်ဖို့ လူတွေနဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းမှာပိုးသတ်နေရမှာ အဲဒီလိုမြင်ပါတယ် ဆရာတော်။”
“အင်း…ဘုန်းဘုးန်က အဲဒီလိုက ရှင်းအောင်မပြောတတ်တော့ ဝေ့နေတယ် ဒကာမိုးရယ်။ ပြောသူနဲ့နားထောင်သူ အယူလွဲသွားရင် သိပ်အန္တရာယ်များ တယ်။ ခုဒကာမိုးပြောတဲ့ဥပမာလေးကိုက်လောက်ပါတယ်။
..ဒါနဲ့ဆရာတော် နိဗ္ဗာန် နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြောနေကြတယ်။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ရှင်းပြလို့ ရမလား…..
အဲ….ဒါက သိပ်တော့မလွယ်ဘူး။ နိဗ္ဗာန်သမိုင်းဆိုပြီး ဆရာတော်တွေ တပါးနဲ့တပါး အယူမတူပုံတွေရေးထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုန်းဘုန်းသိတဲ့ အတိုင်းလေးပြောရရင်..နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ..ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဒုက္ခချုပ်ရာ ပဲ။ ……ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်…သစ္စာလေးပါးမှာ…ဒုက္ခသစ္စာ…ဒုက္ခသမုဒယ သစ္စာ…(ဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတဲ့ ကိလေသာ တဏှာ) ဒုက္ခနိရောဓသစ္စာ..ဒုက္ခ ချုပ်ရာ သစ္စာလို့ပြတယ်ဒကာမိုးရဲ့။
အဲဒီဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက် အတိုချုံးလျှောက်ရမယ့်လမ်းစဉ်ဆိုတာ မရှိဘူးလား။…..
ရှိပါ့ဗျာ….မဂ္ဂင် ၈=ပါးပဲ။ မဂ္ဂ..ဆိုတာကိုက လမ်းလို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ အဲဒီမဂ္ဂင် ၈=ခုက….အမြင်မှန်အောင်..အမှန်မြင်အောင်လုပ်။ အတွေးလဲ မှန်အောင်လုပ်။ နောက် ပြောတာတွေ။….လုပ်တာတွေ…။နေထိုင်တာတွေ မှန်အောင်လုပ်။ မှန်မှန်ကန်ကန် ကျိုးစားအားထုတ်။ မှန်ကန်တဲ့သတိလေး အမြဲထား။နောက်သမ္မာသမာဓိကို အဓိပ္ပါယ်ယူကြတာက နှစ်မျိုးတွေ့တယ်။ စိတ်ကိုဘယ်မှမသွားအောင် ထိမ်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းလို့လဲ ယူဆကြတယ်။ အဲဒီလိုယူရင် အမြင်မှန်ဖို့….အတွေးမှန်ဖို့ဆိုတဲ့နှစ်ချက်နဲ့ညိနေသလိုပဲ။ နောက်သမ္မာသမာဓိကို….ဦးတည်ချက်..တည်ငြိမ်ဖို့..အခုလုပ်ချင်..အခု မလုပ်ချင်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ဖို့…ရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုရင် မရောက်မချင်း ဦးတည်ချက်မယိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ တည်ငြိမ်မှုကိုလဲ ကောက်ကြတယ်။ ဒါလောက်ရှိ ရင် ဒကာမိုးကိုယ့်ဖာသာစဉ်းစားပြီး ကိုယ်ကြိုက်တာယူပါ။ အမှားအမှန်ကိုဘုန်းဘုန်းမသုံးသတ်ပါဘူး။…..
အခုလို တပည့်တော်ကို ဘုရားအဆုံးမတွေသိအောင်ပြောပေးတာ ကျေးဇူးပါ ဆရာတော်…..
မလိုပါဘူး…ဒါက ဘုန်းဘုန်းတို့လုပ်ရမယ့်တာဝန်ပဲ…ဘုန်းဘုန်းတို့က သာသနာ့ဝန်ထမ်းတွေပဲမဟုတ်လား…..၀န်ထမ်းပီသအောင်…တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရမှာပေါ့…..
လတ်တလောဟော့နေတဲ့ လျှပ်စစ်မီးအကြောင်းလေးလဲ တရားဟောပါဦး ဖလာ့
အူးဇင်းဇောက် ဖရာ့ ။ အပေါ်က မိုးကြိုးပွတ်ခံထိမယ့် ဆံပင်ထောင်ရှက်ဘဲ ပြောတာကို အုပစ်ခါ ပြုပြီး ၊ အခုပို့ စ်လိုမျိုးလေးတွေ ဆက်လက်ရေးတင်ပေးပါ ဖရာ့။